Ubudlelwane: kuyini futhi kungani sidinga? Ubudlelwane buyingqayizivele, umdanso ekuphileni kokubili. Abantu abavumelani nje nobuhlobo, bashukunyiswa okuthile okunye. Isifiso sokungabi yedwa, ukuvikelwa, sithandwa. Wonke umuntu ufuna ukuthi yena nomuntu wonke bafune ukuthola umlingani wabo womphefumulo. Omunye ongeyena inhlanhla, futhi ubheka phambili injabulo yakhe, kanti omunye unenhlanhla futhi lapha yena uyisijackpot ecacile. Futhi konke njengalokhu kunoma iyiphi indaba iphela. Ubudlelwane buya phansi - futhi ayikho incazelo yalokhu. Ngemuva kokucacisa isimo, lapho sifunde izimpendulo zemibuzo ezithakazelisayo, asazi ukuthi sisabele kanjani kuso. Uma ngaphansi kwengcindezi umuntu uyavuma ukuba nomunye - yini okufanele ayenze?
Ukukwabelana nomuntu nomunye ongekho wonke owesifazane kuyothanda lo mbono. Omunye waba ngowokuqala, futhi uqhubekele obala, noma uhlale umkhuba. Lona ukhetho olubi kakhulu. Ukuze wenze lokhu, kubalulekile ukuqonda ukuthi kungani ethola omunye owesifazane nokuthi kuyini kuye.
Mhlawumbe indoda yakho ingomunye walabo abathandayo, ababuthe inani elikhulu lothando olungenasisekelo, uthando olufunayo ukunikeza omunye umuntu. Futhi inkinga lapha akukhona ukuthi wena lapha awumamukeli wonke ama-caresses akhe nemizwa, futhi inkinga ukuthi awukwazi ukwamukela konke. Ufana nomgodla ogcwele, lapho amanzi amaningi angakwazi ukungezwa khona. Kulesi simo, indoda ifuna omunye umgodi ofuna ukugcwalisa uthando lwakhe, ukunakekela. Kungabonakala ukuthi indoda ithola enye eyodwa, imcindezele kancane kuye, uyavuma ukuba nomunye, yini okufanele akwenze? Kubalulekile ukucabanga ukuthi udinga umlingani wakho. Uma uqaphela isidingo sakho, khona-ke zama ukuphumula kancane imizwa yakho, ukuze uthole amanzi amnandi, amnandi. Bonisa ukunakekelwa okungaphezulu kumuntu, futhi noma ngabe yikuphi okwenzayo ungagudli abahlaziyi. Vele ukhombise ukuthi uyamthanda ngaphezu kwanoma ubani futhi ufanelwe wena kuphela, ukuthi nguwe kuphela ongaphila ngaphansi kwephiko lakhe lokunakekelwa nothando. Uma umuntu eqaphela ukuthi uyakudinga, abanye besifazane bayomane bapheleke empilweni yakhe ngokushesha futhi kalula njengoba bekungena.
Futhi kuthiwani uma, ngaphansi kwengcindezi, umuntu uyavuma ukuba nomunye, okufanele akwenze, uma lokhu kuyiphutha lakho? Masinyane uzibuze umbuzo walokho unecala, kungani kungukuthi uyiphutha lakho, futhi akusilo lo msulwa. Impendulo ilula. Indoda ingumfana ofanayo, inja efanayo edinga ukunakwa ngokwanele. Uma uhlale umthokozisa, phatha, unike isikhathi esanele, uthando nothando, akasoze ashiye enye, leyo engakwazi ukukubeka esikhundleni. Futhi, kuyadingeka ukukhombisa - indoda yakhe, okudingwa kuye nokuthi ngubani ongowakhe. Uma uqonde ngokucacile ukuthi uyayidinga njengomoya, ungabe usuqeda amandla. Yiba ngumuntu ohlakaniphile futhi umlwela nje, ungabuyiseli kuphela emndenini, kodwa wenze kanjalo ukuthi yena ngokwakhe uqobo lwakhe, noma, okungenani, wacabanga ukuthi kuyisinqumo sakhe.
Qaphela ukuthi inzuzo yakho ikuphi, ngemuva kwakho konke, ngesizathu esithile ukukhetha kwakhe kuyekile kuwe. Cabanga ngalokho owawufakela kuso futhi ungahlala eduze kwakho, mhlawumbe ubujabule kakhulu, ujabulisa, unamandla, futhi manje nje ulahlekile ukuma. Sebenzisa lezi zimfanelo njengenzuzo yakho ukuze uphinde uthole inhliziyo yomuntu wakho. Ngaphezu kwalokho, ngaphezu kwalokho, mnike isikhathi esengeziwe nokunakekelwa. Khumbula ukuthi uwunqobile kanjani, ukuthi ukunqoba kanjani futhi phambili ukuthatha. Bhala imilayezo oyiphuthelwa yona, ngesikhathi sokusebenza kanye nayo yonke le tape ebomvu ejwayelekile, shayela, ubuze ukuthi wenza kanjani emsebenzini, lungiselela kwasekuseni, ubone ukusebenza, ngisho noma ufuna ukulala amahora ambalwa, uhlele okungalindelekile, kodwa ezimangalisa ezimnandi. Amadoda afana nezingane ezincane aholwa kuzo zonke izinto ezihlwabusayo, ezikhanyayo futhi ezithakazelisayo. Hlanganisa naye, udwebe, ubonise ukuthi ngeke abe khona emhlabeni wonke okuhle nokunethezeka njengoba eseduze nawe. Wena ngokwakho ngeke uqaphele ukuthi lokhu kuzokwenza kanjani ukuhlukanisa impilo yakho ndawonye, ​​kwenze kube mnandi, ubuyele kumuntu, futhi kuzoqinisa ubuhlobo bakho.
Uma umuntu evuma ukuthi unomunye, kodwa futhi ngaphansi kwengcindezi, cabanga ukuthi ungaba nokuthile okuqhubekayo naye. Ama-hysterics aqoqa, izingxabano lapha ngeke zisize, isinqumo esisodwa kuphela esifanele ukuthola isizathu sokwenza okunjalo nokuzikhethela. Uma engumdabuli, akekho okumele kwenziwe ngakho. Ungavali indlu yakhe enqabeni, ungambophezi esihlalweni, ngakho-ke akabaleki ekufuneni i-adventure. Kuzodingeka sithathe noma sitshele, kungakhathaliseki ukuthi kunzima kangakanani. Futhi uma nje ungabambeli muntu wakho, bakhathele umyalo, noma uthola lowo ayelokhu efuna futhi engakuboni kuwe. Khona-ke ungamcindezeli, umkhombise ukuthi angathonyanga ikusasa naye ongaboni. Cha, yebo, ungazama ukuyibuyisela, kubonakala kungcono, uqonde uhlobo lunikazi owesifazane aludingayo futhi abe njalo. Kodwa kuyoba umdlalo, futhi awukwazi ukudlala le ndima yonke impilo yakho, ukuze uhlale uvalekile. Ngesinye isikhathi, ukushintsha kuzokwenzeka, khona-ke ngeke ukwazi ukwenza noma yini, kufanele ubhekane nemiphumela. Enhlekeleleni yomunye umuntu, injabulo yomuntu ayikwazi ukwakheka. Ngakho-ke kungcono ukuthi ungazitholi, futhi uzilinganise manje, ukuze uqhubeke futhi uthole injabulo yakho yangempela?
Futhi, uma ngaphansi kwengcindezi umuntu uyavuma ukuthi abe nomunye - yini okufanele asenze kithi, akhohlisiwe? Kulungile, ukubekezelela isimo bese uhamba. Into esemqoka akumele ingene ekucindezelekeni, ayizange ibasize noma ubani, kepha yandisa isimo. Yenza lesi simo singabi buhlungu ngawe, kodwa ngokuphambene nokujabula, okusha. Ngemuva kwakho konke, ngaphambi kokuba uvule ama-horizons anganqamuki. Manje unayo ihora elisha. Ekugcineni ungakwazi ukuzibona uma ungakaze ube nakho ngaphambili. Manje usukhululekile futhi ungenza okunye, zama okuthile okusha. Izwe lonke livulekile kuwe. Yazi, ufanelwe okuhle kakhulu futhi okuhle kakhulu kulindelekile, futhi indoda engakuthandi futhi ayikuthandi, ngakho-ke akazange alwe nawe futhi kalula wenqabe. Kodwa emva kwakho konke, akulona konke lokho, umvikeli wakho kanye nenkosi endaweni ethile eduze kakhulu. Zilungiselele izinguquko ezithile, shintsha isitayela, isithombe, umbuthano wokuxhumana, izindawo zokuphumula, ubhalisele ukuqeqeshwa okunye, izifundo zizosiza nokuzilibazisa okusha, noma mhlawumbe ufunde incwadi entsha izandla ezingazange zifinyelele kuzo. Ngokuvamile, umuntu kufanele afunde ukuthi uzithanda kanjani, khona-ke lolu thando luzokuheha uthando olusha kuwe. Ngakho-ke, okwenziwe empilweni, konke kwenziwa kuphela ukuze kuzuze ikusasa lethu.
Ingabe kudingeka ngithethelele umyeni wami?
Ukuhlukaniswa: ukukhashelwa komyeni wakhe
Indlela yokubuyisela ukwethenjwa emndenini emva kokuhlukunyezwa
Indlela yokuhlala emndenini onomthengisi
Umlingisi u-Ekaterina Guseva
Isinkwa esinamabhanana kanye nosawoti omuncu
Indlela yokusebenzisa igridi ye-iodine ngendlela efanele
Umzwelo ongenangqondo wokukhathala
Ingabe kuyingozi ukuyeka ukuzibandakanya kocansi?
Amakhekhe ama-blueberries ngaphandle kwamaqanda
Ungabhubhisa kanjani ama-burrs eminwe yakho?
Cheesecake ngaphandle kokubhaka